Shiinaha soo -saareyaasha basaska adag iyo kuwa alaabada | GUULEYSTA
Haa-102 Φ20 T2 baarka naxaasta ah ee loogu talagalay biraha GIS
Basbar naxaas ah oo adag ayaa laga sameeyey naxaas C110. Waxaa lagu farsameeyaa shaabadaynta, foorarka CNC, dhammaynta daaweynta iyo insulaiton. Dhammaadka busbarku wuxuu noqon karaa naxaas qaawan, dahaarka dahaarka ah, dahaarka nikkel iyo dahaadhka dahabka ah.Ku -daboolku wuxuu noqon karaa PVC, tuubada kulaylka PE, dahaarka budada epoxy iyo PA12. Waxaa si aad ah loogu adeegsadaa qalabka wax lagu beddelo, transformer, relay, batteriga, nidaamyada kaydinta tamarta, tuulmooyin lacag -bixin ah, forklift koronto, baakad baabuur koronto iwm iwm.
warshaddu waxay astaysto daasadda dahaadhka leh ee barbar barbar barbar
1. Dhaqdhaqaaq koronto oo aad u fiican.
2. Xoog isku xirnaanta sare.
3. Naxaas T2 saafi ah.
4.Barbar -bireedka naxaasta ah ee loo adeegsado transformer -ku wuxuu leeyahay astaan ​​u oggolaanaysa kororka kuleyliyaha iyo foosha
5.Madebka birta -naxaasku wuxuu bixiyaa dabacsanaan ugu badan wuxuuna yareeyaa gariirka. Waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa nidaamyada baska naxaasta, isku -xirayaasha transformer -ka iyo Beddelka Danab ee Sare.
warshad u astaysto daasadda dahaadhay guri bar bar naxaas bar bar
Qalab noocee ah ayaa loo baahan yahay in lagu sameeyo busbaarada?
Marka la eego agabyada basaska, cimri dherer iyo xaalad shaqo oo la isku halleyn karo ayaa aad muhiim u ah, astaamaha maaddaduna waxay saamayn ku yeelanayaan tan. Maaddooyinka leh astaamaha xoogga farsamada sare ee xiisadda, iska caabin koronto oo hooseysa, fududeynta been abuurka, iska caabbinta sare ee daxalka ayaa aad u wanaagsan Sidaas darteed, naxaas iyo aluminium leh sifooyinkan ayaa ku habboon in la sameeyo busbaarada
Iyadoo loogu talagalay tabinta iyo xoogga, naxaasku wuu ka fiican yahay aluminium. Taas bedelkeeda, filimka oksaydhka ee ka samaysma dusha naxaasku waa tabin.
In kasta oo naxaasku ka qaalisan yahay aluminiumka, haddana dad badan ayaa doorbida naxaas si ay u sameeyaan basaska.
warshad u astaysto daasadda dahaadhay bar bar bar naxaas barbar
Waxyaabaha: T2 (E-CU58, CU-ETP, C11000, C1100)
Copper Aluminium xiran
Ama qalab kale sida codsiga macmiilka.
Dhammee: Dahaarka dahaarka ah, dahaarka nikkel, dahaadhka lacagta ama loo habeeyay.
Xirxirida: Xirxirid iyo sanduuq alwaax ka samaysan si looga fogaado baarka baska oo jabay ama xumaaday.
Waqtiga xigashada: 1-2 maalmood ka dib marka la helo sawirro.
Hore: baarka bustaha leh
Xiga: usha tabinta naxaasta ah
Busbar Copper Custom
baarka bustaha leh
gacanta taabashada naxaasta